Golaha Guurtida Oo Kulan Xaasaasi ah ka yeeshay Mawduuca Mudo Kordhinta Iyo Soo Jeedinta Madaxweyne Siilaanyo | Araweelo News Network (Archive) -
Golaha Guurtida Oo Kulan Xaasaasi ah ka yeeshay Mawduuca Mudo Kordhinta Iyo Soo Jeedinta Madaxweyne Siilaanyo
Hargeysa (ANN) mudanayaasha golaha guurtida ayaa saaka kulan xaasaasi ah ka yeeshay qorshaha mudo kordhinta maalmihii u danbeeyay la hadalhayay. Kadib markii ay soo dhowaatay mudada kama danbaysta ah ee ay kaga dhantahay labada gole baarlamaan Guurtida iyo wakiilada oo ku beegan 29 Oct, 2010.
Sidaa awgeed madaxweyne Axmed Maxamed maxamuud Siilaanyo ayaa qoraal uu kaga codsanayo in golaha guurtidu waajibka dastuuriga ah ka qaato usoo gudbiyay golahaa. Qoraalkaa oo maanta laga akhrirar fadhigii aan caadiga ahayn ee mudanayaasha golaha guurtidu yeesheen, kaas oo mudanayaashu u balameen maalinta beri ah in dib laysugu soo noqdo. Iyadoo ay mudanayaasha oo ku yimi tiro aqlabiyad ah ay qaarkood filayeen in saaka qalinka lagu duugo mudo kordhin dhawr sanandood ah oo aan goluhu wax dood ah ka samayn.
Hadaba arrimahaa iyo mushkiladaha siyaasadeed ee mawduuca mudo kordhinta iyo afkaaraha iyp ujeedooyinka dhinacyada laga riixayo waxaanu idiin kusoo gudbin doonaa qoraalo danbe oo falanqayn iyo faaqidaad aanu mawduucaa ku lafa gurayno.